မိုးစက်ပွင့်: Freedom Writers
အစားကောင်းလေးတွေစားရရင် ချစ်ခင်သူတွေကို သတိရတတ်သလို အခုမျှဝေချင်တာလေးကတော့ သံလွင်အိမ်မက် အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်းက ညီညီ (သံလွင်)ရဲ့ ဆောင်းပါး ကောက်နုတ်ချက်လေးပါ။ စာရေးသူက သူပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ခုအဖြစ် မင်းသမီး Hilary Swank ပါဝင်တဲ့ ၂၀၀၇ခုနှစ် Humanitas ဆုဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ Freedom Writers ဇာတ်ကားကို တင်ပြထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက ဒီလိုပါ ………
………. Erin Gruwell (Hilary Swank ) ဟာ Woodrow Wilson အထက်တန်းကျောင်းကို စာသင်ပြဖို့ ပထမဆုံး ရောက်လာခဲ့ပြီး အဲဒီအချိန်ဟာ အမေရိကရောက် အာဖရိကတိုက်သား၊ တောင်အမေရိကတိုက်သား၊ အာရှတိုက်သားစတဲ့ လူမျိုးစု ပေါင်းစုံကို စာသင်ခန်းတွေထဲ တပေါင်းတစည်းတည်း သင်ကြားတဲ့ အစီအစဉ်ကို စတင်နေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေဟာ အစုအဖွဲ့တွေ ကွဲနေကြပြီး တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ ရန်စောင်နေကြတာပါ။ အဲဒီ ဒေသမှာလည်း ဒုစရိုက်မှုတွေ ထူထပ်နေပြီး စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို ဂိုဏ်းအဖွဲ့လိုက် ရိုက်ကြတာတွေ ပစ်ခတ်တာတွေ ရှိနေတဲ့ ကာလပါ။ Erin စာသင်ရတဲ့ အတန်းဟာ လူငယ်ပြုပြင်ရေးသင်တန်းကျောင်းက ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ၊ အိမ်ပြေးလေးတွေ စသဖြင့် လူပေလူတေလေးတွေချည်း ရှိတဲ့ အတန်းပါ။ ဟိုးမားရဲ့ Odessy ကို သင်ယူဖို့ထက် Snoop Dog သီချင်းတွေကိုသာ ခုံမင်ကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေကို အင်္ဂလိပ်စာပြ ပေးရတဲ့ ဆရာမ တစ်ယောက် အနေနဲ့ အစ ပထမမှာ အတော်လေး အခက်ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ သူမ စာသင်ရတဲ့ ပထမဆုံးနေ့မှာပဲ အတန်းထဲမှာ ကျောင်းသားအချင်းချင်း စကားများပြီး ခိုက်ရန်ဖြစ်ကြလို့ လုံခြုံရေးတွေ ရောက်လာပြီး ရှင်းပေးခဲ့ရတဲ့ စာသင်ခန်းမှာ သင်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံဟာ တော်ရုံသူဆိုရင်တော့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်ပြီး လက်လျော့သွားမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Erin ဟာ ဒီလူပေလူတေကလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားအောင် သင်ပြပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ကြံဆနေခဲ့ပါတယ်။
ဆရာမ Erin ဟာအခက်အခဲအမျိူးမျိူးကြားက အောက်ပါတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
- ပုံမှန် သင်ခန်းစာတွေ အစား စာသင်ခုံတွေကို အတန်းဘေးကို ကပ်ခိုင်းပြီး အတန်းရဲ့ အလယ်မှာ စည်းတစ်ခု တားပြီး ဆရာမကမေးခွန်းလေးတွေမေးမေးသွားတိုင်း စည်းပေါ်မှာ ရပ်တဲ့သူရပ်၊ ဘေးကိုထွက်တဲ့သူကထွက် အကြိမ်ကြိမ်ဖြေဆိုမှူလုပ်ရတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုကိုဆော့ကစားစေပါတယ်။ ဂိမ်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ သူတို့ တတွေမှာ လူမျိုးစုတွေ ကွဲနေကြပေမယ့် တူညီတာတွေ ရှိပါသေးသလား ဆိုတာ အတန်းထဲက ကျောင်းသားတွေ သတိပြုမိသွားတယ်။ ဒီလို မတူညီတာတွေထဲက တူညီမှုတွေကို ရှာဖွေနိုင်မှ ညီညွတ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရဲ့ လမ်းစကို ရှာဖွေနိုင်မယ်ဆိုတာ သူတို့တတွေ ခပ်ရေးရေး သဘောပေါက်သွားကြပါတယ်။
- နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ အားလုံးအတွက် ဗလာစာအုပ် တစ်အုပ်စီယူပေးပြီး ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုနေ့စဉ်ရေးဖို့၊ ဆရာမကဖတ်မှာမဟုတ်ဘဲ ရေးမရေးသာ ကြည့်မှာဖြစ်ကြောင်း။ ဖတ်စေချင်တဲ့အခါ ဆရာမဘီရိုထဲမှာ လာထားရမဲ့ အကြောင်း ပြောပြ လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။ (((ဒါဟာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ self-awareness ကိုမြှင့်တင်ရင်း ဆရာမနဲ့ တပည့်ကြားက trust building ကိုတည်ဆောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်))) ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာမ Erin တို့ အကြားက ဆက်ဆံရေးဟာလည်း တနေ့တခြား တိုးတက်လာခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားတွေက သူမကို ချစ်စနိုးနဲ့ Miss G လို့တောင် ခေါ်နေကြပြီလေ။
- ပြီးတော့ Erin ဟာ ကျောင်းက ပြဌာန်းတဲ့ စာအုပ်တွေ အစား ကျောင်းသားတွေ စိတ်ပါဝင်စားမယ့် စာအုပ်လေးတွေကို သူ့လခထဲကနေ ၀ယ်ပေးရတယ်။ ဒီလို အမြဲလိုလို ၀ယ်ပေးနိုင်အောင် သူမဟာ အချိန်ပိုင်း အလုပ် ၂ ခုကို လုပ်ရရှာတယ်။ ဒီ့အတွက် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ဆရာဆရာမတွေရဲ့ ပြစ်တင် ဝေဖန်တာကိုခံရသလို ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ငြိုငြင်မှူကိုပါ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
- နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ ဂျူးတွေနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ပြတိုက်ကို သူမဖခင်နဲ့အတူ ကျောင်းသားတွေကို စရိတ်ခံပြီး လိုက်လံပြသခဲ့တာပါပဲ။ နာဇီ အကျဉ်းစခန်းတွေက သေကံမရောက် သက်မပျောက်ဘဲ လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ဂျူး လူမျိုး တချို့ကိုပါ ဖိတ်ပြီး ကျောင်းသားတွေနဲ့ အတူ ညစာ စားစေခဲ့တယ်။ အဲဒီ ညစာစားပွဲက အပြန်မှာ ကျောင်းသား တချို့ဟာ အိမ်မှာ ဖွက်ထားတဲ့ သေနတ်တွေကို စွန့်ပစ်လိုက်ကြသလို အိမ်ပြေးကောင်လေး တစ်ယောက်လည်း သူ့ရဲ့ နေအိမ်ကို ပြန်ပြီး အမေ့ကို တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ Erin ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေ တစတစ အကောင်အထည် ပေါ်လာပြီလာပြီလေ။
- နောက် စာသင်နှစ်သစ်ရဲ့ ပထမဆုံးနေ့မှာတော့ Erin ဟာ အတန်းရှေ့က စားပွဲပေါ်မှာ ကျောင်းသားတွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ စာအုပ်တွေ ထည့်ထားတဲ့ အိတ်လေးတွေရယ် ဖျော်ရည်ထည့်ထားတဲ့ ဖန်ခွက်တွေရယ် တင်ထားတယ်။ သူမက ကျောင်းသားတွေကို ရှင်းပြတယ်။ ဒါဟာ “Toast For Change” ပါတဲ့။ သူမက တဆက်တည်း ဒီ ဖျော်ရည်ခွက်တွေကို သောက်လိုက်ပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် မလုပ်နိုင်ဘူး၊ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ဟူသမျှဟာ ပျောက်ပျက်သွားပြီ။ နောက်ပြီး အရင်ကနဲ့ လုံးဝမတူတော့တဲ့ ဘ၀အသစ်ကို ဖန်တီးဖို့ အချိန်ရောက်ပြီလို့ ပြောလိုက်ပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို တစ်ယောက်ချင်း ကိုယ်ပြုပြင်မယ့် အပြောင်းအလဲကို ပြောခိုင်းပြီးတာနဲ့ ဖျော်ရည်ကို သောက်ခိုင်းခဲ့တယ်။ ((( ဆရာမက psycho ကျွမ်းပုံရတယ်၊ auto-suggestion လုပ်ခိုင်းလိုက်တာလေ )))
- နောက်ထပ်ရိုက်ချက်တွေက ပိုပြင်းလာပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကို Diary of Anne Frank လို့ အမည်ရတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်ဖို့ ပေးလိုက်ပြီး ဂျူးလူမျိူးကလေးမလေး Anne Frank ကို အသက်မသေအောင်ဝှက်တားပေးခဲ့တဲ့ အမျိူးသမီးကြီး Mie Gies ကို စာရေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာပါပဲ။ ကျောင်းသားတွေက Mie Gies ကို သူတို့ကျောင်းကိုဖိတ်ချင်လို့ လိုအပ်တဲ့ ငွေကို အစားအသောက် ရောင်းတဲ့ပွဲတွေ၊ သီဆိုကခုန်ပွဲတွေ လုပ်ပြီး ရံပုံငွေ ရှာကြမယ်လို့ အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ ပေးကြတယ်။
- နောက်ဆုံး အသက်၇၀ကျော် အမျိူးသမီးကြီး Mie Gies က သူတို့ရဲ့ ကျောင်းရှိရာကို တကယ်ပဲ ရောက်လာပြီး သူတို့တတွေကို ဟောပြောနေခဲ့တယ်။
-ကျောင်းသားလေးတွေဟာ တချိန်က လူဆိုးလူပေလေးတွေ ဘ၀ကနေ အခုဆို တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ဖြစ်ချင်တာတွေကို ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ လူငယ်လေးတွေ အဖြစ် အသွင် ပြောင်းလဲလာခဲ့ကြပြီလေ။တချိန်တည်းမှာပဲ ကျောင်းသားတွေ အမြဲလိုလို ကိုယ်စီ ရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်ထဲက ဇာတ်လမ်းတွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ သူတို့ရဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကို စာအုပ် အဖြစ် ထုတ်ဝေဖို့ အတွက် ကျောင်းသူကျောင်းသား အားလုံး တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီစာအုပ်ရဲ့ နာမည်ကိုတော့ “Freedom Writers’ Dirary” လို့ ပေးခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့တယ်။
ဆရာမ Erin တစ်ယောက် ကျောင်းသားလေးတွေအရေးကြောင့် ခင်ပွန်းသည်နဲ့ ပြတ်စဲရတဲ့အထိ နစ်နာခဲ့ရပေမဲ့ သူမရဲ့ဖခင်ကတော့ သမီးကို အလွန်လေးစားမိပါတယ်တဲ့။ သူမကိုယ်တိုင်က စေတနာ ပြည့်ဝပြီး ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ မိမိလုပ်ရပ်ကို ဂုဏ်ယူနေမှာမလွဲပါဘူး။ …………….
ဆောင်းပါးမူရင်းကိုချူံ့ထားပါတယ်။ ကျမကိုယ်တိုင်လဲ အဲဒီကားကိုမကြည့်ရသေးပါဘူး။ ကားကောင်းတစ်ကားမို့ရှာကြည့်ပါဦးမယ်။ ဇာတ်အိမ်ချင်းဆင်တဲ့ (((ကျောင်းသားဆိုးတွေနဲ့ ပြုပြင်ရေးသမားဆရာ))) တွေပါတဲ့ကားတွေတော့ ရံဖန်ရံခါကြည့်ဖူးပါရဲ့။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကျွန်မတို့နိုင်ငံက အသက်ကြီးပြီး အတွေးမကြီးတဲ့ ပေတလူ ကလေးဆိုးကြီးတွေကို ပြုပြင်ဖို့ Hilary Swank ကိုများဖိတ်ရရင် ကောင်းလေမလားလို့ တွေးမိပါသေးရဲ့ရှင်။